Maazị Andy Ụba mere ka a mara nke a n'ozi ọ kụpụrụ n'isi mmalite izuụka a, site n'aka onye enyemaka pụrụ iche nye ya n'ihe gbasaara mgbasa ozi, bụ maazị Joseph Ịtazi, ma bụrụkwa nke o sitere na ya kpọọ oku ka e nwee ezi nkwekọrịta, udo na mmekọrịta n'etiti ndị otu abụọ ahụ.
O kwuru na nke ahụ gbọwara ya obi ma wutekwa ya nke ukwu oge ọ natara ozi banyere nkwatụ ahụ, bụkwa nke mezịrị ka o ziga ozi ozigbo ozigbo n'ụlọ ọrụ ọgbọ nta nkwado ya dịma kpọọ iji wee jụta ihe mere, otu ọnọdụ siei gbata kwụrụ, nakwa ihe butere ya bụ nsogbu n'uju. Ọ sịkwa na ya ga-akpọtụrụ onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị iji wee hụ na e nwere ezi nnyocha ghe anya oghe banyere nke ahụ ma wetekwa ọnọdụ ọjọọ ahụ n'isi njedebe.
Dịka onye ọnọ mgbe o mere siri kọọ, ya bụ nsogbu bụ nke malitere na mgbede ụbọchị Satọdee gara aga, dịka ndị ọrụ nchekwa SARS buuru ụgbọ ala ha wụchaa ma gbakpọọ n'otu ebe a na-añụ mmanya, a maara dịka Guzoro, wee malite ite ndị nọ ebe ahụ añụ mmanya ure nakwa ịchọ ka ha ga-esi kpụkọsịa ndị mmadụ nọ ebe ahụ ezuru onwe ha ike, bụzị nke mere ka ụmụ okorobịa obodo ahụ nupute ma jụwapụ ya isi na o nweghị onye ọbụla ha ga-akpụ wee pụọ n'ebe ahụ.
Nke ahụ mezịrị ndị ọrụ nchekwa ahụ jiri wee kwụghepụ egbe wee kwaba mgbọ aghara aghara, nke mezịrị ka ụmụokorobịa ahụ were iwe manye ha ọgụ, nsogbu wee daa. Ka ọ dị ugbu a, a lago ndụ otu onye ọrụ SARS n'iyi, mebie ọtụtụ ihe, ebe ọtụtụ natakwara mmerụ ahụ dị iche iche, tinyere ụgbọala ndị ọrụ nchekwa ahụ a gbagoro ọkụ, na ọtụ ihe ndị ọzọ e megoro n'ihi ajọ ọnọdụ ahụ.
Maazị Andy Ụba kpọkuzịrị onye ọbụla ka ọ mịnye mma ya n'ọbọ ma gbaso ọnọdụ udo iji wee hụ na ya bụ nsogbu abawanyeghị, ọbụnadị dịka nnyocha na-aga n'ihu banyere nke ahụ.